မြန်မာစကားပုံများ အပိုင်း (၁) « kyunhla Township
Home » Education » စာပေကဏ္ဍ » မြန်မာစကားပုံများ အပိုင်း (၁)
မိမိ၏မိခင်ရင်းကို တမ်းတအောင်မေ့ခြင်းမပြု၊ အမေနှင့်စပ်မှတော်ရသည့် မိခင်၏ ညီမ မိထွေးကိုသာ အမေထက်ပို၍ သတိရတမ်းတ လွမ်းဆွတ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အားကိုးသင့်သူ သွေးနီးစပ်သူကို မမီခိုဘဲ တခြားသူကိုကျော်လွှား၍ အားကိုးမှီခိုလိုခြင်း ကိုရှုတ်ချသည့်အနေဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
ရောက်လာခြင်းမှာ ကောင်းသော်ငြားလည်း အချိန်က နောက်ကျလွန်း၍ အခွင့် အရေးရနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘဲ လာဘ်လာဘဆုံးရှုံးရသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဆုံးရှုံးရလောက်အောင် အခါနှောင်းခြင်း၊ရက်လွန်ခြင်း၊ နောက်ကျခြင်းတို့အတွက် သုံးနှုန်းသည်။
(၃)စိန်ကောင်း ကျောက်ကောင်းရောင်းဝယ်ရာ ဆေးရိုးသည်ကန့်လန့်
အဖိုးတန် စိန်ကောင်း ကျောက်ကောင်း အရောင်းအ၀ယ်စကားပြောနေရာတွင် အဖိုးမတန်သော ဆေးရိုးသည်ကလည်း မိမိဆေးရိုးရောင်းချရရေးအတွက် ကြားဝင်၍ ပြောဆိုစွတ်ဖက်နေသည်ဟုဆိုသည်။ အရေးကြီးသော ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အရေးမကြီးသော ကိစ္စကို စွတ်ဖက်ပြောဆိုခြင်းကို ရှုတ်ချဟန့်တားသည့်သဘောဖြင့် ခိုင်းနှိုင်းသုံးသည်။
လျှာသည်အစာကို လူးလိန်းရာတွင် သွားစေ့သည်နှင့်လွတ်အောင် အလိုက်သင့် ဖယ်နေကျဖြစ်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ခါတွင် သွားနှင့်မလွတ်ဘဲ လျှာအကြိတ်ခံရတတ် သကဲ့သို့ လင်နှင့်မယားသည် စိတ်ချင်းတူညီအောင် ကြိုးစားလေ့ကျင်မှု ရှိကြသော် လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကတောက်ကဆ ဖြစ်တတ်သည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ လင်နှင့်မယားသည် အမြဲသင့်တင့်နေသည်မဟုတ်ဘဲ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား တတ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
လင်နှင့်မယားသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စရိုက်ဝါသနာခြင်းတူညီမှသာ အမြဲတစေ ဆက်ဆံမှုအဆင်ပြေနိုင်သည်ဖြစ်ရာ သဘောအသွင်စရိုက်မတူညီပါက အိမ်ရှင်မကောင်း မဖြစ်နိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ လင်နှင့်မယားစရိုက်တူညီသင့်ကြောင်းကို ဖော်ပြရာ၍ သုံးနှုန်း သည်။
(၆)စားရမှာလည်း သဲနှင့်ရှပ်ရှပ်၊ ပစ်ရမှာလည်းအဆီနှင့်ဝင်းဝင်း
ပုပ်ထဲသို့ကျသော ၀က်သားတုံးသည် စားရမည်ကလည်း သဲနှင့်ရှပ်ရှပ်ဖြစ်၍ စား၍မဖြစ်၊ လွှင့်ပစ်ရမှာလည်း အဆီနှင့်ဝင်းဝင်းဖြစ်၍ မပစ်ရက်ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုလို သည်။ အကြပ်အတည်း နှစ်ခုကြား၊ နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ကြား အဆုံးအဖြတ်နှစ်ရပ် အကြားတွင် တစ်ဖက်သို့မလိုက်သာဘဲ အခက်အခဲတွေ့ရသည့်အခါတွင် သုံးနှုန်း သည်။
ထောင်ချောက်ဖြင့်ထောင်သည်မှာယုန်ကိုထောင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းယုန်ကမတိုးဝင်ဘဲ ကြောင်က၀င်မိသဖြင့် ကြောင်ကိုမိနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ချိန်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖြစ်မလာဘဲ မချိန်ရွယ်မမျှော်လင့်သည်တို့က ဖြစ်လာသည့်အခါတွင် သုံးနှုန်း သည်။ တစ်စုံတစ်ခုကို ဦးတည်ပြုလုပ်ရာတွင် ဦးတည်ချက်မဟုတ်သော ပြီးပြတ်မှု၊ ဖြစ်ပျက်မှုမျိုးကို အမှတ်မထင် ကြုံတွေ့ရသည့်အခါတွင်လည်း သုံးသည်။
လူတစ်ယောက်သည် အလိုဆန္ဒအမျိုးမျိုးရှိရာ ထိုအလိုဆန္ဒဟူသမျှကို နတ်သိကြားတို့က ပြည့်စုံအောင် ဖန်ဆင်းစေကာမူ အလိုမပြည့်နိုင်ဘဲ နောက်ဆုံး ကျွဲ ယောင်ဆောင်ပေးသည်ကိုပင် အမြီးတိုသည်။ ချိုစောင်းသည်ဟူ၍ အပြစ်တင်မလွတ်၊ အလိုမပြည့်နိုင်ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ လူတို့၏အလိုဆန္ဒများပြား၍ အလိုမပြည့်နိုင် သော ဘ၀ကို တင်စား၍ သုံးနှုန်းသည်။
စပါးကိုကြိတ်ထိုး၍ ဆန်လုံးတီးစေ့ကို ထောင်းမှ ဆန်ဖြူဆန်ကောင်း ရရှိနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ဆန်စေ့မပါတော့သည့် ဖွဲကြမ်းခွံကို မည်မျှပင် ထောင်းဖွပ်သည်ဖြစ် စေ ဆန်ကောင်းထွက်ပေါ်၍ မလာနိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။ အရင်းအခြေကပင်လျှင် ကောင်း မွန်သောအရည်အသွေး အခြေဗီဇမျိုးကောင်းမျိုးသန့်မပါဘဲနှင့် မည်မျှပင်အပင်ပန်း ခံ၍ ပြုပြင်စေကာမူ ကောင်းမွန်တိုးတက်မှု ရရှိမလာနိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။
သံပုရာသီးသည် အလုံအရွယ်ကြီးလာလေလေ အချိုဓာတ်မ၀င်တော့ဘဲ ပို၍သာ ချဉ်လာလေလေဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသလောက် ပို၍ လိမ္မာမလာ၊ တိုးတက်မလာဘဲ ပို၍သာ မိုက်မဲနိမ့်ကျသွားသည့်အခါတွင် သုံးနှုန်းသည်။
သူတစ်ပါးက ဆန်ခိုးသည်ကို မြင်သဖြင့် ရလိုရငြားနှင့် နောက်မှဝင်ခိုးသူသည် ဆန်မတွေ့တော့၍ ဖွဲကိုခိုးရလေရာ ဆန်ခိုးသွားသူကို ပိုင်ရှင်မမိပဲ ဖွဲခိုးသူမှာသာ အမိ ခံရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အကြီးအကျယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှာ လည်ပတ်သဖြင့် အပြစ် မသင့်ပဲ အနည်းငယ် အပြစ်ပြုမိသူမှာ အလည်မ၀ယ်နှင့် အပြစ်ဒဏ်သင့်ရောက်ရသည့် အခါမျိုးတွင်လည်းကောင်း၊ သူတစ်ပါးနှင့်အတူ ပြုမူရာတွင် သူတစ်ပါးမှာအပြစ်လွတ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှာသာ အပြစ်သင့်သည့်အခါမျိုးတွင်လည်းကောင်း သုံးနှုန်းသည်။
တံငါနှင့် နီးစပ်ပေါင်းသင်းသောအခါ တံငါအလုပ်ကို တတ်ကျွမ်း၍ တံငါဖြစ်လာ သကဲ့သို့ မုဆိုးနှင့် နီးစပ်ပေါင်းသင်းသောအခါ မုဆိုးအတက်ကို တက်ကျွမ်း၍ မုဆိုးဖြစ် လာသည်ဟု ဆိုသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အလျောက် နီးစပ်ယဉ်ပါးခြင်း ဖြစ်ရသည်ကို ပေါ် လွင်စေရန်သုံးနှုန်းသည်။
အရောင်အနာပျောက်စေသော လိမ်းဆေးဆီကို ရောင်ရမ်းနေသည့် နေရာတွင် မလူးဘဲ မရောင်သည့်နေရာတွင် လိမ်းကျံနေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဆောင်ရွက်သင့် သည့် ဒေသ၊ ကာလ၊ ပယောဂကိုမငဲ့ဘဲ အရမ်းအလွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးကို ရှုတ်ချ၍ ဆိုသည်။
(၁၄)အပွေးမြင် အပင်သိ အသွေးမြင် အသွင်သိ
အပွေးအခေါက်ကို မြင်ရုံမျှနှင့် မည်သည့်သစ်ပင်ဖြစ်သည်ကို သိနိုင်သကဲ့သို့ အပေါ်ယံ အရည်အသွေးကို ကြည့်ရုံနှင့် အသွင်သဏ္ဍာန်အလေ့စရိုက်ကို ထိုးထွင်းသိနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အပေါ်ယံအကဲရိပ်ဖြင့် အနှစ်သာရ အတွင်းသဘောအလေ့စရိုက်ကို ချင့်ချိန် သိစွမ်းနိုင်ကြောင်း တင်ပြရာ၌ သုံးနှုန်းသည်။
၀မ်းဆွဲလက်သည်မကျွမ်းကျင်သဖြင့် သားဖွားခက်ခဲလျက် ရှိသောအခါတွင် ၀မ်းဆွဲက မိမိမကျွမ်းကျင်မှုကို အပြစ်မတင်ဘဲ ဓမ္မတာအတိုင်း သားဖွားမှု ခက်ခဲသည် ကိုသာ အပြစ်တင်၍ ပြောသည်ဟုဆိုလိုသည်။ မိမိချို့ယွင်းချက်ကို အပြစ်မမြင်ဘဲ အခြားအကြောင်းပြစရာကို အပြစ်လွှဲချတတ်ခြင်းကို ရှုတ်ချသည့်အနေဖြင့် သုံးနှုန်း သည်။
(၁၆)ကြံကို အရင်း ဆန်ကို ဆန်ရင်း လူကို လူရင်း
ကြံသည် အရင်းဘက်ကသာ ပို၍ အရသာလေးပင်သည်။ ဆန်မှာ ဆန်ရင်း ကသာ အဆီအနှစ်ပြည့်ဝသည်။ ထိုနည်းအတူပင် လူမှာလည်း သွေးသားရင်းချာ သူသာလျှင် ပို၍ မှီခိုအားထားရသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ကြံ၏အဖျားသည် အရသာပေါ့၍ ပယ်သကဲ့သို့ ဆန်ကွဲသည် အရသာ မလေးနက်၍ ပယ်သကဲ့သို့ သွေးစိမ်းသူကိုလည်း စိတ်မချ၍ မယုံမကြည် ပယ်သင့် သည်ဟု ဆိုလိုရာရောက်သည်။
မိမိကိုယ်တိုင် ကျွေးမွေးပြုစုလာခဲ့သော မျောက်က ကျွေးမွေးထားသူ ကျေးဇူးရှင်ကိုပင် ပြန်၍ ခြောက်လှန့်ပြနေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
သူတစ်ပါးကျေးဇူးကို သိတတ်ခြင်းသည် သူတော်ကောင်းတို့ အလေ့အကျင့် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ယုတ်မာသောသူတို့သည် မိမိအပေါ်၌ ကျွေးမွေးပြုစုသော ကျေးဇူးရှင်ကိုပင် မခြွင်းချန်ဘဲ ပြန်၍စော်ကားကျေးဇူးကန်းတတ်လေသည်။ ထိုသူများသည် အသိအလိမ္မာနည်း သော တိရစ္ဆာန်မျောက်ကဲ့သို့ ကျေးဇူးပြုထားသူကိုပင်ပြန်၍ ခြောက်လှန့်တတ်သူများ ဖြစ်သည်ဟု ပုံခိုင်း၍ဆိုသည်။ မိမိပယောဂဖြင့် မိမိကျေးဇူးမဲ့ ဖြစ်ရတတ်သောအခါမျိုးတွင် သုံးနှုန်းသည်။
သူခိုးနှင့် ချစ်ကြိုက်နေသော မိန်းမသည် သူခိုးကို လင်ကဖမ်းမိ၍ လုံးထွေးသတ် ပုတ်ရင်း ဓားတောင်းသည်တွင် လင်ဘက်သို့ ဓားအရိုးမပေးဘဲ သူခိုးက လင်အားသတ် နိုင်လေအောင် သူခိုးဘက်သို့ ဓားရိုးထားကာ လင်ကိုကမ်းပေးဟန်ပြုသည်ဟု ဆိုလို သည်။ ရန်သူအား အခွင့်သာအောင် ပက်ပင်းသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ သူ့လူကိုယ့်ဘက် သားလုပ်၍ အချင်းချင်းအား အန္တရာယ်ပြုတတ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ မကောင်းမှုပြုသူ အား မြှောက်ပင့်အားပေးသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ သုံးနှုန်းသည်။
တစ်နေ့လျှင် အနည်းငယ်မျှသာ ရွေ့လျားသွားလာစေကာမှု သွားဖန်များသော် မိုင် ပေါင်းများစွာ ခရီးရောက်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ တဖြည်းဖြည်း ပြုလုပ်ဖန်များသော် များပြားကြီးမားသော အကျိုးကို ပြီးစေနိုင်ပုံကို တင်စားဆိုသည်။ (မောင်ပေါက်ကျိုင်းဝတ္တု တွင် ပါရှိသည်။)
အစာအိမ်အူမ တောင့်တင်းပြည့်ဝအောင် စားသောက်နေထိုင်နိုင်ပါမှ ကိုယ်ကျင့် တရားလည်း စိတ်အေးသက်သာ ထားရှိထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ တရားအားထုတ်ခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်၍ ဒုစရိုက်နှင့်ကင်းဝေးခြင်း သည်လည်းကောင်း ၀မ်းရေးပြည့်စုံမှသာ ဖြစ်နိုင်သည်ကို ရည်ရွယ်၍ဆိုလိုသည်။
ကြောင်ချေးမှာအမြင်အားဖြင့် ပျော့စိစိရှိ၍ အနံ့အသက် ပြင်းထန်ဆိုးရွားသည် ဟု မထင်ရစေကာမူ အနံမှာစူးစူးရှရှ ဆိုးရွားနံစော်လှသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အမြင်အား ဖြင့် ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်းရှိသလောက် ခက်ထန်တင်းမာသောသူမျိုး မထင်မှတ်ပဲနှင့် အစွမ်းပိုကဲသော သူမျိုးကို တင်စား၍သုံးနှုန်းသည်။
လူတစ်ယောက်သည် မပြေးပါဟုငြင်းဆိုသော်လည်း ပြေးရန်အားယူသည်။ ထိုသူ၏ခြေကန်ရာကို တွေ့ရသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ တစ်စုံတစ်ရာ ငြင်းကွယ်ရာတွင် လုံးဝယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိဘဲ ငြင်းကွယ်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်သော အထောက်အထား များက ပေါ်လွင်နေသည့်အခါတွင် ခိုင်းနှိုင်း၍သုံးသည်။
ဉာဏ်နည်းသော လှေသားတစ်ယောက်သည် လှေပေါ်မှ ပစ္စည်းတစ်ခု ရေထဲသို့ ကျသွားရာ ချက်ချင်းငုပ်၍မရှာဘဲ ကျရာနေရာဆီ၌လှေနံကို ဓားဖြင့်ထစ်၍ မှတ်သား ထားပြီးနောက် အတန်ကြာလှေမျောပြီးမှ လှေနံမှ ဓားထစ်ရာနေရာတည့်တည့်သို့ဆင်း ၍ ငုပ်စမ်းသော် ကျသောပစ္စည်းကိုမတွေ့ရတော့ဘဲ ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ တစ်နေရာ တည်းကို စိုက်လိုက်မတ်တတ် ပုံသေမှတ်သားခြင်းကို ရှုတ်ချ၍သုံးနှုန်းသည်။
မီးတောက်အင်အားနည်းပြီး ရေကများသောအခါ မီးငြိမ်း၍ ရေကနည်းပြီး မီးတောက်အင်အားကြီးမားသောအခါ မီးကိုမငြိမ်းသတ်နိုင်ဘဲ မီးကရေကိုခန်းခြောက် အောင် ဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ အရေအတွက်ပမာဏ အင်အားကြီးမားရာဘက်မှ အနိုင်ရတတ်ခြင်းသဘောကို ဖော်ပြရာတွင် သုံးနှုန်းသည်။
ကျားလက်တွင်းသို့ရောက်သော နွားသည် ကျား၏ကိုက်သတ်ခြင်းကို မလွဲမသွေ ခံရတော့မည်ဖြစ်ရာ ကျားက သနား၍ လွှတ်ပါမှသာ နွားအဖို့ ချမ်းသာစရာလမ်းရှိတော့ သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ကျားဟူသည်မှာ နွားအပေါ်၌ သနားသည်ဟူ၍ မရှိလေရာ ချမ်းသာရဖို့လမ်းမှာ မျှော်လင့်ချက်ရှိမည်လိုနှင့် ဝေးလှသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
လူတစ်ဦး၏ ကံကြမ္မာကို မဖန်တီးနိုင်ဘဲ အခြားသူတစ်ဦးက ချုပ်ကိုင်ချယ်လှယ်၍ ထိုသူ၏ စီမံဖန်တီးချက်အတိုင်း ဖြစ်တည်ရ သည့်အခါ တစ်ဖက်က အင်အားဖြင့် လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်ခြင်းကို ခံနေ ရသည့်အခါမျိုးတွင် သုံးနှုန်းသည်။
ကျောင်းဆောက်၍ လှူသူသည်ကျောင်းဒကာဖြစ်ရမည်မှန်သော်လည်း ကျောင်း ဆောက်ဖြစ်မည် မဆောက်ဖြစ်မည်မှာ မသေချာသေးသဖြင့် ကျောင်းဒကာ ဖြစ်ရင်းမှာ မသေချာသေး။ ကျောင်းဆောက်ဖြစ်ပါမှ ကျောင်းဒကာဖြစ်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ အကျိုး ကျေးဇူးရရေးမှာ ကြားလုပ်ငန်းတစ်ဆင့် အောင်မြင်ပါဦးမှ အလား အလာရှိမည့် အခြေအနေမျိုး၊ မသေချာသေးသည့် အခြေအနေမျိုးတွင်သုံးနှုန်းသည်။
ဘူရိဒတ်ဇာတ်တွင် အလမ္ပာယ်ပုဏ္ဏားသည် နဂါးမတို့ထံမှ ကျန်ခဲ့သော ပတ္တမြား ကိုရပြီးနောက် မုဆိုးအား ဘူရိဒတ်နဂါးမင်းနေရာကို ပြခိုင်း၍ သိရသောအခါ အတုံ့ အပြန်အားဖြင့် ပတ္တမြားကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်သဖြင့် နဂါးနှင့်ပတ္တမြားကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်သဖြင့် နဂါးနှင့် ပတ္တမြားလက်ငင်းလဲလှယ်ကြသည်ဟုဆိုလို သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အလဲအလှယ်ပြုရာတွင် ချက်ချင်းလက်ငင်း လက်ထိလက်ရောက် လဲလှယ်ကြသည့်အခါတွင် သုံးနှုန်းသည်။
(၂၈)ရှမ်းကြိုက် နွားချော(ရှမ်း စကားပုံ)
ရှမ်းအမျိုးသားတစ်ဦးတစ်ယောက်က နွားကိုရွေးချယ် ၀ယ်ယူသောအခါ ထိုရှမ်း အမျိုးသား အကြိုက်ရွေးထားသော နွားသည် ထိုရှမ်းအဖို့ နွားချောကဲ့သို့ပင် အကြိုက် တွေ့စေပြီး ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ နွားချောကဲ့သို့ပင် အကြိုက်တွေ့စေပြီး ဖြစ်သည် ဟုဆိုလိုသည်။ နွားချောကိုသာ လူများကြိုက်တတ်သည်ဖြစ်ရာ ရှမ်းအမျိုးသားအဖို့မှာ သူကြိုက်သော နွားဖြစ်လျှင် သူ့အဖို့ နွားချောဟုပင်ဆိုနိုင်သည်။ (အချို့ ရှမ်းအမျိုး သားသည် နွားမရွေးတတ်သဖြင့် သူရွေးလျှင် နွားချောမုချသာဖြစ်သည်ဟုလည်း ယူဆကြသေးသည်။) မိမိစိတ်၌ ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာသည် ပကတိအားဖြင့် ချောမောသည်ဖြစ်စေ၊ မချောမောသည်ဖြစ်စေ စိတ်ဆန္ဒ၌ ချောမောပြီးသားဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုရာ၌ သုံးနှုန်းသည်။
လှည်းကထားသောနွားသည် မရုန်းမထွက်သာဘဲ ရှေ့သို့တိုးလျှင်လည်း ထမ်းပိုးက တားဆီးထားပြီး နောက်သို့ဆုတ်လျှင်လည်း လှည်းထုပ်က တားဆီးထား သဖြင့် အကျဉ်းအကြပ်နှစ်ဖက်ကြားတွင် မလှုပ်မယှက်သာ ရှိနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အခက်အခဲ အတားအဆီးနှစ်ဖက်ကြားတွင် ရှိနေရသည့်အခြေအနေကို ပေါ်လွင်စေရန် သုံးနှုန်းသည်။
လူက မိမိနှင့်ထိုက်တန်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသောအခါ မိမိ မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို အပြစ်မဆိုဘဲ ကံအကြောင်းမကောင်း၍သာဖြစ်သည်ဟု ကံကိုပုံ၍ အပြစ်ချခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ လူမကြိုးစားဘဲ ကံကိုအပြစ်ပြောတတ်သူမျိုးကို အပြစ် တင်သော သဘောဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
ဘ၀အဆက်ဆက်က အတုံ့အပြန် ဆုတောင်း၍ ရန်ဖက်ပြုခဲ့ရာမှ တစ်ဦးက သမင်ဖြစ်၍ သားမွေးသော် တစ်ဦးက ကျားဖြစ်၍ စားပစ်သည့်ပုံကို ရည်၍ဆိုသည်။ အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း ပျက်စီးကုန်သည့်အခါတွင် အဖက်မတင်နိုင်သည့်အခါတွင် သုံးနှုန်းသည်။
ဖားကောက်သူသည် အိတ်အပေါက်နှင့်ဖားကောက်လေရာ ကောက်၍ထည့်လေ သမျှဖားများက အပေါက်မှ လျောကျခုန်ထွက်၍ တစ်ကောင်မျှ မကျန်ဘဲရှိသည်ဟုဆိုလို သည်။ ရသမျှအဖတ်မတင်အောင် ထွက်လမ်းရှိသူကို ရည်၍ မစုဆောင်းမိခြင်းကို အပြစ် ဆိုသုံးနှုန်းသည်။
အလှူပွဲတွင် အလှူရှင်သည် မိမိအား အလှူရှင်ဖြစ်ကြောင်း ကွဲကွဲပြားပြား သိမြင်နိုင်အောင် မဏ္ဍာပ်တိုင်ကို ပြုပြင်စရာရှိဟန်နှင့် ကိုယ်တိုင်တက်၍ အလှူရှင် ကိုယ်ရောင်ပြနေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ မိမိ၏စွမ်းဆောင်မှု၊ ကြိုးပမ်းမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ အတွက် ၀င့်ကြွားတတ်လွန်းသောသူကို ကဲ့ရဲ့သည့်အနေဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
အဖက မွေးသောသားသည် မုချအဖအောက် ငယ်ရမည်ဖြစ်ပါလျက် အဖထက် အသက်တစ်လပို၍ ကြီးချင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ မသာလွန်၊ မကျော်လွှားနိုင်ဘဲလျက် သာလွန်ချင်သူများကို နှိပ်၍ ဆိုရာ၌သုံးနှုန်းသည်။
ယုန်ကိုခွေးနှင့်လိုက်စေရာယုန်ကတောင်ဘက်သို့ပြေးသော်လည်းထူအသောခွေးသည်ယုန်ကို မျက်ခြေပြတ်သွားသဖြင့် မြောက်ဘက်သို့ ပြေးသည်အထင်ဖြင့် မြောက်ဘက်သို့ ပြေး၍လိုက်သည်ဆိုလိုသည်။ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုသည် လိုအပ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီဘဲ တကွဲတပြား၊ မဟပ်မစပ်ဖြစ်သည့်အခါတွင် သုံးနှုန်း သည်။
ချေးမယိုချင်သေးမှီက အိမ်သာအဘယ်မှာ ရှိသည်ဟု အမှတ်မထားဘဲ ချေးယိုချင်လာ သောအခါကျမှ ချေးခံတွင်းပေါက်ရှာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ မိမိ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားဘဲ လက်တွေ့ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်တွင် အပူတပြင်း ပျာပျာသလဲရှာဖွေစူးစမ်း ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုးကို ရှုတ်ချ၍ ဆိုသည်။
(၃၇)မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ (ဇွန်းခွက်ကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ)
ထမင်းဝိုင်းတွင် ဟင်းလိုက်ပေးရာ၌ မျက်နှာကြီးငယ်မရွေးတတ်၍ ကြွယ်ဝချမ်းသာသူ၊ လိုလားသူ၏မျက်နှာကိုငဲ့၍ ထိုသူအား ဟင်းဖတ်များစွာထည့်ပေးပြီးလျှင် အခြားသူများကို ဟင်းရည်လောက်သာ ထည့်ပေးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ (ဟင်းခပ်ရာ တွင် အတူအညီ တစ်ကြိမ်စီခပ်သော်လည်း ဇွန်းခွက်ကြီးသူအဖို့၌ ဟင်းဖတ်ပို၍ များစွာပါသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။) ဖြောင့်မတ်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ မညီမမျှ မျက်နှာလိုက်တတ်ခြင်းကို ရှုတ်ချ၍သုံးနှုန်းသည်။
မူလစတင်သည့်အခါ ကောင်းမွန်အခြေတည်ပါမှ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရာတွင် နောက်ပိုင်း ၌ ကောင်းမွန်နိုင်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စတင်ဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင် ကောင်းမွန်ကျန မှန်ကန်စွာ စတင်နိုင်အောင် သတိပေးညွှန်ပြသည့်အနေဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
မိမိခွန်အားနှင့်မဆောင်ရွက်နိုင် မစွမ်းဆောင်နိုင်သော အရာ၌ ဆောင်ရွက်လို သော ဆန္ဒမာန် အားထက်သန်မှုကိုလျော့ပါးပစ်ခြင်းဖြင့် သက်သာရာရစေသင့်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ မိမိအင်အားနှင့် မပြိုင်ဆိုင်နိုင်သောအခါ မိမိစိတ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် တိုက်တွန်း ရာ၌ သုံးသည်။
သေးငယ်သောအမှိုက်စကလေးကိုစွဲလောင်သည့်မီးပင်လျှင်မီးအားကြီးကူးစက်၍ ပြာသာဒ်ကြီးတစ်ခုလုံး လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ငယ်သော အမှုကလေးသည်ပင် ကြီးသော ပြဿနာကြီးဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် အမှုကိစ္စအစွန်းအစကို ငယ်သည်ပမာမထား၊ သတိပေါ့ဆခြင်း မပြုသင့်ကြောင်း တင်ပြသုံးနှုန်းသည်။
အကျိုးကျေးဇူး စည်းစိမ်ချမ်းသာကို တပင်တပန်း အနစ်နာခံ၍ ကြိုးပမ်းအားထုတ် ယူမှသာ ရနိုင်သည်။ အလွယ်သင့် သက်သက်သာသာနှင့် မရနိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။ ပင်ပန်း အားထုတ်မှု လုံ့လဖြင့် မရင်းနှီးဘဲ အကျိုးမမြတ် မပေါ်ထွက်နိုင်ကြောင်း ပြဆိုရာ၌ သုံးနှုန်းသည်။
ခွေးကို သားရေပြားခင်း၍ သိပ်ထားသောအခါ ခွေးသည် ထိုအိပ်သော သားရေ အနားကိုပင် ဖဲ့၍ ကိုက်စားသောက်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ မိမိအား စောင့်ရှောက်ခိုလှုံခွင့် ပေးထားသူ၏ အကျိုးကိုပင် ထိပါးအောင်ပြန်၍ စော်ကားပြစ်မှားသည့်အခါတွင် သုံးနှုန်း သည်။
ငါးစိမ်းမရရှိသောအခါ ငါးကင်ကိုပင် အမြတ်တနိုး ဟင်းမည်ကောင်းအဖြစ် အသုံးပြုနေရပြီး ငါးစိမ်းရသောအခါတွင်ကား အမျိုးမျိုး ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်နိုင်သဖြင့် ငါးကင်ကို မမက်မောတော့ဘဲ စွန့်ပစ်လိုက်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အသစ်အဆန်းကို တွေ့မြင်ရသောအခါ အဟောင်းကို ခွာကန်စွန့်ပစ်သည်ကို ရှုတ်ချသုံးနှုန်းသည်။
လက်သည်းကို ဆိတ်ဖဲ့သောအခါ လက်သည်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော လက်ထိပ် ဖျားသည် နာကျင်ခြင်းဖြစ်ရသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ နီးစပ်သောသူ တစ်ဦးတစ်ယောက် ကို ထိပါးခြင်းဖြင့် ကျန်နီးစပ်ဆက်ဆံသူ သွေးနီးသူများကိုပါ နားကြည်းထိပါးစေသည် ဟု ဆိုလိုသည်။ အကျိုးသွားဆက်စပ်ပုံကို ထင်ရှားစေလို၍ သုံးနှုန်းသည်။
အသီးကို အလိုရှိသော် အသီးသီးရာအပင်ကို ခုတ်ချိုင်ပြီးမှ အသီးကို ဆွတ်ခူးရယူ နိုင်သကဲ့သို့ သမီးကိုအလိုရှိလျှင်လည်း ပင်ရင်းဖြစ်သော မိခင်ကို ချဉ်းကပ်၍ အလိုကျ အောင် တိုင်ကြားခွင့်ပန်၍ ရယူနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ပင်ရင်းအညှာကိုအကြောင်းပြု၍ ပေါက်ရောက်မည့်နည်းလမ်းကို လိုက်နာရန် ညွှန်ပြသည့်အနေဖြင့်သုံးနှုန်းသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာ မရှိဆင်းရဲခြင်းသည် ဒုက္ခအခက်အခဲ တွေ့ရတတ်သည်ဟုဆိုရ သော်လည်း ပညာဗဟုသုတမရှိ၊ အကောင်းအဆိုးမဝေခွဲတတ်သော မသိခြင်းကား ဒုက္ခအခက်အခဲကို ပို၍ရောက်စေသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ကြီးသူက ကောင်းစေလို၍ လက်ဖြင့်ရေးသားညွှန်ပြထားသည်ကို ငယ်သူက ခြေနှင့်ပွတ်ဖျက်ပစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်က စေတနာဖြင့် ပြုလုပ် စီမံသည်ကို အခြားတစ်ဦးတစ်ယောက်က မလိုဆန္ဒဖြင့် ဖျက်ဆီးပစ်သည့်အခါတွင် ရှုတ်ချ၍သုံးနှုန်းသည်။
ဆင်အဖို့ ကျီစားသည့်အနေဖြင့် ဆိတ်ငယ်ကို ပုတ်ခတ်ကန်ကျောက်ခြင်း ပြုလုပ်စေကာမူ အင်အားခြင်းမမျှသော ဆိတ်ငယ်အဖို့မှာ မသက်မသာ ပြင်းထန်စွာ ခံစားရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အင်အားခြင်းမတူမျှသောအခါ တစ်ဦးအဖို့ မဖြစ်လောက် သော အပြုအမှုသည် တစ်ဖက်သားအဖို့ မခံရပ်နိုင်သောအမှုဖြစ်နေတတ်သည့်အခါ တွင် တစ်ဖက်သားကို စာနာထောက်ထားရန် သတိပေးသည့်အနေဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
လူ၏ အခြေအနေမှာ ဆင်းရဲနုံချာ၍ ချုံကြိုချုံကြားတွင် နေရလောက်အောင် အခြေအနေနိမ့်ကျစေကာမူ စိတ်ထားမျှော်မှန်းချက် သို့မဟုတ် မာနမှာ အထက်ဘုံဖျား ထိလုမတတ် မြင့်မားသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အခြေအနေမရှိဘဲ စိတ်နေကြီးမြင့်တတ်ခြင်း ကို ရှုတ်ချလို၍ဖြစ်စေ၊ ချီးမွမ်းလို၍ဖြစ်စေသုံးနှုန်းသည်။
ခရီးလမ်းတွင် အလျင်လိုသောအခါ လမ်းသစ်ကိုရှာ၍ လိုက်ပါက လမ်းထွင်၊ ရှာရသည်နှင့် ပို၍ဖင့်နှေး ကြန့်ကြာတတ်သဖြင့်ထွင်ပြီး လမ်းဟောင်းလမ်းရိုးကိုသာ စိတ်ချလက်ချ လိုက်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ နည်းစနစ်လမ်းဟောင်းတို့သည် ခိုင်လုံကောင်းမွန်စိတ်ချရအောင် စမ်းသပ်ပြီး ဖြစ်တတ်ပုံကို ထင်ရှားစေလိုရာ၌ သုံးသည်။
အကြံအစည်ရည်မှန်းချက်ခြင်းတူညီနေသောအခါအချင်းချင်းတုပြိုင်၍တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အသားယူရန် ၀န်တိုရန်ပြုလာတတ်သဖြင့်ရန်သူဖြစ်ရသည်ဟုဆိုလိုသည်။အကြံအစည်တူညီသူချင်းကိုစိတ်ချ ယုံကြည်နိုင်စရာနည်းပါး ကြောင်းကို ပေးသည့်အနေဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
ပတ္တမြားအစစ်သည် နွံဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်းခံရသော်ငြားလည်း ပင်ကိုယ်မူလအရောင် မညစ်နွမ်း၊ မမှေးမှိန်နိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။ စစ်မှန်သော အရည်အချင်းရှိသူသည် မည်သည့်အကာအဆီး အဖုံးအအုပ်ပင် ခံရသည်ဖြစ်စေ မူလအရည်အချင်းသည် မှေးမှိန် မသွားဘဲ ထွန်းတောက်မြဲပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
(၅၃)အစားမတော်တစ်လုတ်၊ အသွားမတော် တစ်လှမ်း
ချင့်ချိန်ဝေဖန်တတ်ခြင်းမရှိခဲ့သော် တစ်လုတ်မျှသော အစာဖြင့်ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေနိုင်၍ တစ်လှမ်းမျှ ခရီးကျွံရုံဖြင့်လည်း လည်းဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။အနည်းငယ်မျှဟူ၍သတိကင်းလွတ်ခြင်း ပေါ့ဆခြင်းမပြုရန် သတိပေးသောအားဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
မိန်းကလေးတို့သည် ဣနြေ္ဒရှင်ဖြစ်၍ ဣနြေ္ဒပျက်စီးအောင် ရွှေငွေပေး၍ ဖြားယောင်းသော်လည်းမရနိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။ မိန်းကလေးတို့ဣနြေ္ဒ စောင့်စည်းတတ် ပုံကို တင်စား၍ သုံးနှုန်းသည်။
မျက်စိကန်းသူ၏ ဇနီးမယားသည် မိမိလင်က ရှုမြင်စေရန် သနပ်ခါးလိမ်းသော် လည်း လင်ကရှုမြင်နိုင်မည်မဟုတ်တော့သည့်အတွက် ထိုမိန်းမအဖို့ သနပ်ခါးလိမ်းရန် မလိုတော့ဟု ဆိုလိုသည်။ အခြေအနေအရ မြင့်မားသူတို့၏ ပကာသန၊ ကြောင့်ကြမှု စသည်တို့မှာ ဆင်းရဲချူချာသူတို့အတွက် လိုအပ်ကောင်းမှလိုအပ်မည်ဖြစ်သဖြင့် တစ်ဦး အခြေအနေအရ လိုအပ်ချက်မှာ တစ်ဦးအတွက် မလိုဟုဆိုလိုသည်။
ဗူးသီးခွံများကို ရေဘူးပြုလုပ်ရာတွင် ထိပ်အပေါ်တည့်တည့်မှ မဖောက်ဘဲ ထိပ်ပိုင်းဘေးတစ်ဖက်ကျကျစီမှ အပေါက်ဖောက်သဖြင့် ထိုအပေါက်ဖောက်သည်ကို နားထွင်းသည်ဟုခေါ်ဆိုရာ ရေနှစ်၍ခတ်သောအခါ နားထွင်းထားသောဘူးထဲသို့ ရေ များ ချောမောစွာဝင်သော်လည်း နားမထွင်းသောဘူးထဲသို့ ရေမ၀င်နိုင်ဖြစ်ရသည်။ သူတစ်ပါးနားဝင်မလွယ်အောင် မရှင်းမလင်း၊ မကွဲမပြား၊ မပီမသပြောသည့်အခါ ဘူးလုံးကို နားမထွင်းဘဲ ရေနှစ်ခဲ့သည့်နည်းပြောသည်ဟု တင်စား၍ပြောသည်။
ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကို နေရာရွှေ့ပြောင်းပို့ကာမှ ခိုးယူခြင်းခံရလေရာ သူခိုးရှိရာ သို့ တမင်ဝန်စည် သည်ပိုးပို့ဆောင်ရသည်နှင့် တူသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အပ်နှံယုံကြည် ထားသူက ကဲ့ဝှက်ဖျောက်ဖျက်၍ ခိုးယူသောအခါတွင်သုံသည်။
ပန်းညိုပင်သည် အလွန်ဖြစ်ထွန်းလွယ်သော အပင်မျိုးဖြစ်၍ ခူးယူဖြတ်တောက် လေလေ အခက်အလက်ပို၍ ဝေေ၀ဆာဆာစည်ကားလေလေဖြစ်သည်ဟု ဆိုလို သည်။ သူတစ်ပါး၏ အနှိမ်ခံရခြင်း၊ အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ရခြင်း စသည်တို့တွင် စိတ်ဓာတ် မကျမဆုတ်နစ်ဘဲ ပို၍ပင်အားသစ်လောင်းကာ ပိုမိုတိုးတက်မှုကို ရရှိအောင်ထပ်မံကြိုး စားတတ်သော အလေ့အထကို တင်စား၍ သုံးသည်။
လက်ခုပ်ဟူသည်မှာ လက်နှစ်ဖက်တီးမှသာ မြည်နိုင်၍ လက်တစ်ဖက်တည်းနှင့် လက်ခုပ်တီး၍မရဟု ဆိုလိုသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အညီအမျှ တာဝန်ရှိ၍ နှစ်ဖက်စလုံး အလိုတူ၊ နှစ်ဖက်စလုံးပယောဂဖြင့် ဖြစ်ပျက်ရသည့်အခါမျိုးတွင် သုံးနှုန်းသည်။
အသက်၊ ရောဂါနှင့် အားနည်းမှုကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးတုန်၍ နေသည်ကို ချမ်း၍ တုန်ခြင်းမျိုးကဲ့သို့ မီးလှုံ၍ ပျောက်ကင်းခြင်းမရှိနိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။ ပြုပြင်၍ မရကောင်း သည်ကို မရနိုင်သောနည်းဖြင့် ပြုပြင်နေ၍ အချည်းနှီးဖြစ်မည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ခက်ခဲခြင်းမရှိ၊ ရန်မူခြင်းမရှိ၊ စွန့်စားရန်မလိုသော ခရုကိုအပန်းတကြီး ခါးတောင်း ကျိုက်၍ ဖမ်းနေခြင်းမျိုးကိုဆိုလိုသည်။ အရာအခွင့်အားလျော်စွာ တန်သင့်ရာ အားထုတ် ရသည်ဖြစ်လျက် လိုသည်ထက်ပို၍ ခွန်အားစိုက်ထုတ် ကြောင့်ကြခံခြင်းမျိုးကို ရှုတ်ချသောအားဖြင့် တင်စားပြောဆိုသည်။
ကြိုးစအပိုင်းအစတို့ကို အသုံးလိုအပ်သည့်အခါတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အသုံးဝင်မည့် ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ အကြံဉာဏ်၊ အတတ်ပညာတို့ကိုအရံသင့် ကောင်းစွာ သိုမှီး ထားရန် ညွှန်ပြသည့်အနေဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
ထမင်းချက်သောအခါ အိုးအရွယ်ပမာဏနှင့်လိုက်သော ဆန်ကိုသာထည့်၍ချက်ရ မည် အိုးကကြီးလွန်း၍ ဆန်ကနည်းနေခြင်း၊ ဆန်ကများလွန်း၍ အိုးကကျယ်နေခြင်း၊ မဖြစ်စေရဟုဆိုလိုသည်။ အချိန်အဆ အခြေအနေဟပ်မိကိုက်ညီတော်တည့်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ညွှန်ပြရာ၌သုံးနှုန်းသည်။
လသည် ကောင်းကင်အာကာယံ၌ ထွန်းလင်းဝင်းပသဖြင့် မြေပြန့်အရိပ်ကင်းရာ ၌ လရောင်သာ၍ လူအများကြည့်ရှုနှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်ရပေရာ ၀ါးလုံးခေါင်းအတွင်း၌ လသာနေသောအခါတွင်ကား မည်သူမျှလည်း မကြည့်မြင်သာ မည်သို့မျှလည်းအကျိုး မပြုဟုဆိုလိုသည်။ အရာဌာနမဟုတ်သည့်နေရာ၌ ၀င့်ဝါအစွမ်းပြ၍နေခြင်းဖြင့် အကျိုး မရှိပုံကို ပေါ်လွင်စေလို၍ သုံးနှုန်းသည်။
နေထိုင်သည့်အခါတွင်မူကား အဖိုးတန် ပျဉ်ထောင်အိမ်နှင့်ဖြစ်၍ စားသောက် သည့်အခါတွင်ကား အဖိုးနည်းသော ချဉ်ပေါင်ဟင်းနှင့် စားရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အမြင်နှင့်လက်တွေ့သည် ခြားနားခြင်းရှိသည့်အခါတွင် သုံးနှုန်းသည်။
ကျားအကောင်ကြီးလျှင် ကျားအရွယ်နှင့်လိုက်အောင် ခြေရာကလည်း ကြီးသည် ဟု ဆိုလိုသည်။
အရာအထူး၊ အခြေအနေ၊ ၀င်ငွေ စသည် တိုးတက်လာသောအခါ သက်သာ ချောင်ချိမည်ဟု ထင်မှတ်ရစေကာမူ တာဝန်၊ အကြပ်အတည်း၊ အသုံးစရိတ် စသည်တို့ မှာလည်း အချိုးကျ တိုးတက်လာသည်သာဖြစ်၍ အခွင့်အလမ်းနှင့် တာဝန်သည်လည်း ကောင်း၊ အရနှင့်အသုံးသည်လည်းကောင်း လိုက်ဖက်စွာ တိုးတက်လာတတ်သည့် သဘာဝကို ဖော်ပြသည်။
၁၃.အလှူရှင် ငါးကြော်အိုး၊ ဆွေမျိုးချည်းပဲ
အလှူရှင်၏ ပရိသတ်ကျွေးရန် ငါးကြော်အိုးအနီးတွင် သူစိမ်းများဝင်နိုင်၊ ချဉ်းနိုင် ခွင့်မရဘဲ အလှူရှင်၏ ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ကသာ ခွစီးစုအုံသိမ်းရုံး၍ စားသောက်နေကြ သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အခွင့်အရေးကို လူအများမျှတစွာ ခံယူနိုင်ခွင့်မရဘဲ နီးစပ်သော လူတစ်စုကိုသာကွတ်၍ ရယူခွင့်ပြုခြင်းမျိုးကို ရှုတ်ချသည့်အနေဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
မိမိက ဖဲ့ခြွေပေးကမ်း မစတတ်မှ ၀ိုင်းရံစောင့်ရှောက်မည့်သူ ပေါ်ပေါက်နိုင်သည် ဟုဆိုလိုသည်။ စေးနဲခြင်းမပြုဘဲ သူတစ်ပါး အကူအညီရအောင် ဖြန့်ဝေပေးကမ်းတတ် ရန်နှိုးဆော်သည့်အနေဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
တစ်ဖက်သားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ ရဲရဲရင့်ရင့် အံတုရန်ငြိုးခြင်းကို ပွင့်လင်းစွာ လည်းမပြုလုပ်ရဲ ပြုလုပ်လည်းပြုလုပ်ချင်သဖြင့် တခြားသူများမသိမမြင်သည့် ကွယ်ရာ မှ ကြိမ်းဝါးမာန်ထောင်ခြင်း ပြုသည့်အခါမျိုးတွင်သုံးနှုန်းသည်။
ရာသီဥတုအားဖြင့် အပူဆုံးလကို နွေရာသီတပေါင်းလဟူ၍ မှတ်သားလေ့ရှိရာ ပူပန်သောကရောက်မှုကို အပူဖြင့် ထပ်တူခိုင်းနှိုင်း ပြောဆိုရာ၌ မိမိပူပန်မှုသည်သာ အပူ ဆုံးဖြစ်၍ သူတစ်ပါး၏ ပူပန်မှုမှာ တပေါင်းလ နေပူချိန်မဟုတ်သေး။ တော်သလင်းလ၏ အပူရှိန်လောက်သာရှိသေးဟန်ဖြင့် နှိမ်၍ဆိုသည်။ သူတစ်ပါးထက် မိမိကပိုလွန်၍ ကြောင့်ကြစိုက်ထုတ်ရပုံကို ပေါ်လွင်စေရန် သုံးနှုန်းသည်။
ဆွေးမြည့်နေသောဝါးသည် အသားမွ၍ ကျေပျက်လွယ်သောကြောင့် ထက်မြက် အောင် သွေးချွန်သော်လည်း ထက်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။ ပင်ကိုအရည်အသွေး ပြည့်တင်းခိုင်မာခြင်းမရှိသူအား ဖြစ်စေလိုသကဲ့သို့ ပြုပြင်သွန်သင်သော်လည်း မရနိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ဟုဆိုလိုသည်။
နှီးအမျိုးအစား ကောင်းမွန်ခဲ့လျှင် ဖျာရက်ရုံမျှလောက်နှင့်မတန် ထိုထက်ပို၍ ချောမြေ့ကောင်းမွန်သော ၀တ္ထုပစ္စည်းတို့ကိုသာ ပြုလုပ်အပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အရည်အသွေးပိုလွန်းကောင်းမွန်သောအရာတို့ကို ချီးပင့်မြှောက်စားပြောဆိုခြင်းပြု သည်။
၀င်လာသော ပစ္စည်းမှာ အပ်ချောင်းလေးမျှသာဖြစ်သော်လည်း ထွက်သွားသော ပစ္စည်းမှာ ပုစိန်ဖြစ်သဖြင့် အ၀င်နှင့်အထွက်မကာမိဟုဆိုလိုသည်။ (အပ်ကိုလိုက်ကောက် သည်နှင့် ပုစိန်ပေါက်ရသည်ကို ရည်၍ဆိုသည်။) အနည်းအပါးမျှသော လာဘ်လာဘ ကြောင့် အကြီးအကျယ် ကုန်ဆုံးလျော့ပျက်ရတတ်ခြင်းကို သတိပေးသည့်အနေဖြင့် သုံးနှုန်းသည်။
အချစ်မေတ္တာဟူသည်မှာ ကြင်နာမှုဖြင့် ပေါင်းစပ်မှ ခိုင်မြဲမှန်ကန်မှုရှိသဖြင့် ကြင်နာ မှုရှိမှ အချစ်ဟူ၍ ခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ရေအနက်အစောက် ရေရှိနေသော အိုင်မှန်ပါမှသာ ကြာပင်ပေါက်ရောက်နိုင် သည်။ ရေပြင်ဖြစ်ရုံဖြင့် ကြာမပေါက်နိုင်ဟု ဆိုလိုသည်။ လုံလောက်သောအကြောင်း အခြေခံရှိသည့်အခါမှသာ ထိုနှင့်လျော်သော အကျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုရာ၌ သုံးနှုန်းသည်။
ဆင်ပြောင်ကြီးက ကျင်ငယ်စွန့်လိုက်သည့်အခါ ဆင်အဖို့ကျင်ငယ်အနည်းအပါး မျှသာဖြစ်သော်လည်း ယင်ကောင်အဖို့မူကား သူ၏ကိုယ်အင်္ဂါအချိုးအဆနှင့် နှိုင်းဆ သောပင်လယ်ကြီးသဖွယ် တပင်တပန်းကူးခတ်နေရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ တစ်ဦးအဖို့ ပမာမထားလောက်သော်လည်း ကျန်တစ်ဦးအဖို့ များစွာထိခိုက်ဖွယ်ရာရှိနိုင်သည်ဟုဆို လိုသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမှာ ပမာဏခြင်း၊ ဆန္ဒခြင်း၊ လိုအပ်ချက်ခြင်း၊ အခြေအနေ ခြင်း၊ ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံခြင်း၊ ခံယူချက်ခြင်း၊ ကွဲပြားခြားနားနိုင်ကြောင်းကို တင်စားသုံး သည်။
ငွေကောင်း မကောင်းကို ပန်းတိမ်ဆရာသာသိသည်။ ပန်းပဲဆရာသည် ငွေ အကြောင်းကိုမသိ။ သံအကြောင်းကိုသာသိနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ မိမိနှင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စ၍သာ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမြဲဖြစ်၍ မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော ကိစ္စမဟုတ်လျှင် မသိမ ကျွမ်းကျင်ဟု ဆိုလိုသည်။
မြှောက်စားမည့်သူ အားပေးမြှောက်စား၍ အသုံးချသောအခါ တုံးနေသောဓားကဲ့ သုိ့ ဉာဏ်ထက်လာရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အသုံးချခြင်းဖြင့် ထက်မြက်မှုရရှိနိုင်သည်ကို ရည်၍ သုံးနှုန်းသည်။
မြွေသည် တွင်းထဲသို့လွယ်ကူစွာ လျှောဝင်နိုင်သော သတ္တ၀ါဖြစ်ခြင်းကြောင့် တွင်းထဲသို့ဝင်ရာ၌ အခက်အခဲ၊ ဖြောင့်ဖြူးသည်။ မြွေမဟုတ်သော အခြားသတ္တ၀ါနှင့် သက်မဲ့အရာဝတ္ထုတို့ဖြစ်လျှင်သာ တွင်းထဲသို့ဝင်ရန် ခက်ခဲခြင်းရှိမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စစ်မှန်သောအရာသည် သူနှင့်ထိုက်လျော်သော ကျွမ်းကျင်ပြေလည်မှု ရရှိသည်။ စစ်မှန်သောအရာ၌ မှန်သောလက္ခဏာရှိမြဲဖြစ်သည်ဟု ရည်ရွယ်၍သုံးနှုန်းသည်။
(၁)…။မြန်မာအို ကျောင်းကြို ကျောင်းကြား ၊ ကရင်အို ချောင်းကြိုချောင်းကြား…(ဗမာစကားပုံ)
ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာ လူမျိုးတို့ အသက် အရွယ်
ကြီးရင့်လာလျှင် စိပ်ပုတီးကို လည်မှာ ဆွဲ၍ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဇရပ် သိမ်
ဘုရားတို့၌ တရား ဓမ္မနှင့် မွေ့လျှော်၍ ဘဝ၏ နေဝင်ချိန်ကို ကုန်လွန်
စေသည် ၊ ကရင် လူမျိုးတို့ အသက်အရွယ် ကြီးရင့် လာလျှင် ချောင်းကြို
မြောင်းကြား၌ ဖားရှာ ငါးရှား ဖြင့် ဘဝ နေဝင်ချိန်ကို ကုန်လွန်စေသည်ဟူ၍
(၂)…။ကောင်းစွာ ပေးကမ်း စွန့် ကြဲလျှင် ရှင်သည် လောဘရှေ့ ထားလျှင် သေ၏…(ချင်းစကားပုံ)
ကောင်းစွာ ပေးကမ်း စွန့် ကြဲလျှင် ရှင်သည် လောဘရှေ့ ထားလျှင် သေ၏ ဆိုလိုသည့်
အဓိပ္ပါယ် မှာ လောကမှာ အလျှုအတန်း ပေးကမ်းရက်ရောသူတို့ သည် အသက်ရှည်ခြင်း
အနာရောဂါဘေးမှ ကင်းဝေးရသကဲ့ သို့လောဘထားသော သူတွေမှာ လိုချင်တက်မတ်
စိတ်ထားတွေကြောင့် ဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြပြီး သေဆုံးနိုင်ကြောင်ဟု ဆိုလိုထားပါခြင်းဖြစ်သည်…..။
အမေးကျွဲကျောင်း အဖြေဘုရားလောင်း ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
မေးလိုရာ မေးရသည်က ကျွဲကျောင်းသားအဖို့ပင် အလွယ်ဖြစ်နိုင် သော်လည်း
ထိုအမေးကို ပြည့်စုံအောင် ဖြေကြားရန် ပညာဉာဏ်ရှိသော ဘုရားလောင်းမှပင်
ဖြေကြားနိုင်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အမေးလွယ်သလောက် အဖြေခက်ခဲတတ်ပုံကို တင်စား၍
(၄)…။အသက်တစ်ရာ မနေရ၊ အမှုတစ်ရာတွေ့ရသည့်…(ဗမာစကားပုံ)
အသက်တစ်ရာ မနေရ၊ အမှုတစ်ရာတွေ့တတ်သည် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
လူတို့သည် သက်တမ်းအရ အများအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း တစ်ရာ မနေရသော်ငြား လည်း
လူတစ်သက်တမ်းအတွင်း ပြဿနာ အခက်အခဲ အမှုပေါင်းမြောက်များစွာမှာ အမျိုး ပေါင်း
ရာချီမကအောင် တွေ့ရတတ်သည်ဟု ဆိုလိုသည် ၊ လူ့လောက၏ ရှုတ်ထွေးပွေလီမှုကို
သရုပ်ဖော်သောအားဖြင့် သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည် ။
သစ်တစ်ပင်ကောင်းလျှင် ငှက်တစ်သောင်းနားခိုရသည်ဟု ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ
သစ်တစ်ပင်သည် အရိပ်အာဝါသနှင့် ပြည့်စုံ၍ ခက်လက်ဝေဆာသောအခါ ငှက်ပေါင်း
တစ်သောင်းမျှ ခိုဝင်နားနေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည် ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ စွမ်း
ဆောင်မှုဖြင့် အများ အတွက် အကျိုးပြီးစီးနိုင်ပုံကို ပြဆိုထားခြင်းဖြစ်သည် ။
(၆)…။ခေါင်းပေါ် ၌ တောင်းတစ်လုံးသာရွက် ၊နှစ်လုံးရွက်ပါလျှင် မငြိမ်သက်နိုင်..(စကောကရင်စကားပုံ)
ခေါင်းပေါ် ၌တောင်းတစ်လုံးသာရွက် ၊ နှစ်လုံးရွက်ပါလျှင် မငြိမ်သက်နိုင် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
တစ်ခုတည်းသော မည်သည့် အရာမဆို တစိုက်စိုက်မတ်မတ်လုပ်မှ သာလျှင် အောင်မြင်နိုင်ကြောင်း စိတ်များထွေပြားပြီး နှစ်ခုလုပ်ပါက မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးမအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း ခိုင်းနိုင်း သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရှင်ဘုရင်တစ်ခါထွက် ၊ ပဲကြီးတစ်လှေချက် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
ရှေးအခါက မြန်မာရှင်ဘုရင် ထွက်တော်မူသောအခါ ထွက်တော်မူကြီး၊
ထွက်တော်မူကလေးဟူ၍ရှိရာ သိုင်းကိုင်၊ ကျိုင်းကိုင်၊ ရှေ့တော်ပြေးမှူး၊
ငှက်ခတ် သမား၊ ၀င်းတော်သား၊ အဆောင်ကိုင်စမြှောင်၊ နာခံ၊ သံဆင့်စသော
မင်းမှုထမ်း၊ မိဖုရား၊ အပျိုတော်၊ သူဌေးသူကြွယ်၊ ပုဏ္ဏား၊ လက်ဝဲဆိုင်း၊
လက်ယာဆိုင်း၊ ခြေလျင် တပ်၊ ဆင်တပ်၊ ရထားတပ်စသည့် အခမ်းအနား
အစီအရင်တို့ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် စီမံ ခန့်ခွဲချီတက်စေရသဖြင့်
ပဲကြီးစေ့လှေတစ်စင်းစာကိုနူးနပ်အောင် ချက်ပြုတ်နေရ သလောက်
အချိန်ကြာမြင့်သည်ဟု ဆိုလိုသည် ၊ အဆောင်အယောင်ချဲ့တတ်၍ ကြာမြင့်စွာ
ပန်းထိမ်မတတ်ခင်၊ ရွှေခိုးသင် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
ပန်းတိမ်အတတ်ကိုသင်ရာတွင် ပန်းတိမ်ပညာကို ကောင်းစွာမတတ်မီက ရွှေကို
မည်သို့ ခိုးယူရမည်ကို ကျော်လွှား၍ သင်ကြားလေ့လာသည်ဟုဆိုသည် ၊
လုပ်သင့်လုပ် ထိုက်သည့်အလုပ်ကို မလုပ်မီနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သည့်
အလုပ်ကိုကျော်လွှား၍ လုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုးကိုအပြစ်တင်၍ သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည် ။
မျတ်ချက်…။ကာလဒေသနဲ့အလျှောက် ကွဲပြားမှု့ရှိပါသည်…။ရွှေခိုး ၊ ရွှေပို ၊ ရွှေခို..။
လှစေလိုလို့သွားကြောတိုက် ၊ ရေစီးကမ်းပြိုလိုက်ဟု ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
လှပစေရန်အတွက် သွားများကို ဖြူစင်အောင် မကြာခဏ တိုက်ချွတ်ဆေးကြောရာမှ
သွားဖုံးများပွန်းရိ၍ ရေစီးကမ်းပြို အနာဖြစ်ပြီး ပို၍အရုပ်ဆိုးရသည်
ဟုဆိုလိုသည် ၊ကောင်းစေချင်၍ အပြင်လွန်းသည်မှ ပို၍ဆိုးရွားရသည့်အခါတွင်
သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ ခွေးကို သားရေပြားခင်း၍
သိပ့်ထားသောအခါ ခွေးသည် ထိုအိပ်သော သားရေ အနားကိုပင် ဖဲ့၍ ကိုက်စားသည်ဟု ဆိုလိုသည် ၊
မိမိအား စောင့်ရှောက်ခိုလှုံခွင့် ပေးထားသူ၏ အကျိုးကိုပင် ထိပါးအောင်ပြန်၍ စော်ကားပြစ်မှားသည့်
အခါတွင် သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည် ။
(၁၁)..။ထမင်းရွေးသူ ဗိုက်မ၀ ရွှေရွေးသူ မကြီးပွား အကောင်းကိုသာ လောဘစိတ်နှင့်မလိုချင်နှင့်…(လီဆူစကားပုံ)
ထမင်း ရွေးသူ ဗိုက်မ၀ ရွှေရွေးသူ မကြီးပွား အကောင်းကိုသာ လောဘစိတ်နှင့်မလိုချင်နှင့်
ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ လိုချင်တက်မတ်မူများပြီး အရမ်းရွေးလွန်း၍ နောက်ဆုံးဘာမှမရနိုင်တာကို ထမင်းစားဝိုင်းတွင် ဟင်းအကောင်းကြိုက်သောသူသည် ဟင်းများရွေးရ၍် ဗိုက်မပြည့်နိုင်သကဲသို့ 
လောကတွင် အလုပ်ရွေးသောသူသည် မကြီးပွားမတိုးတက်နိုင်ပါ ၊ မည်သည့်အရာမဆို လောဘ
စိတ်မပါပါက အကောင်းရနိုင်ပါသည်ဟု ဆိုလိုထားခြင်းဖြစ်သည် ။
ထိုးမည့်ဆင် နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်သည်ဟု ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
အစွယ်ကိုအားပြု၍ ထိုးရန် ဟန်ပြင်သည့်ဆင်သည် အရှိန်ယူရန် နောက်သို့
တစ်လှမ်းဆုတ်လေ့ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည် ၊ သူတစ်ပါးကို အနိုင်ယူမည့် သူသည်လည်း
နိုင်လောက်မည့် အခွင့်အလမ်းကို စောင့်လင့်ကာ အသာအယာ နောက်ချန်အားယူ၍
တစ်ရှိန်ထိုး တိုက်ခိုက်ရန် အားပြင်ထားရမည်ဟု ဆိုလိုထားခြင်းဖြစ်သည် ။
လျှောမွေးတစ်ကောင်နှင့် ဗာရာဏသီချဲ့သည်ဟု ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
သားပျက်သောမိန်းမသည် မအောင်မြင်မွေးသော လျှောမွေးရင်သွေးငယ် အတွက်
ပူဆွေးသောကရောက်၍ ငိုယိုရာတွင် ရိုးရိုးမငိုဘဲ ဗာရာဏသီပြည့်ရှင်မင်းကြီးက အစ
စကားချဲ့ကာ ဖွဲ့နွဲ့တိုင်တည် ငိုကြွေးနေသည်ဟု ဆိုလိုသည် ၊ လူတစ်ယောက်ကာ
အသေးအဖွဲ့ကိစ္စကို လိုသည်ထက်ပိုလွန်၍ အကြီးအကျယ်ချဲ့တတ်ခြင်းကို ရှုတ်ချသော
အားဖြင့် သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည် ။
(၁၄)..။မုန့်ဆီကြော် ဘယ်နေမှန်းမသိ နှုတ်ခမ်းနာနှင့် တည့်မလားမေးသည်…(ဗမာစကားပုံ)
မုန့်ဆီကြော် ဘယ်နေမှန်းမသိ နှုတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်ပါ့မလားမေးသည် ဆိုလိုသည့်
အဓိပ္ပါယ် မှာ မုန့်ဆီကြော်ကို မကြော်ရသေးမီက စားချင်သူသည် နှုတ်ခမ်းနာနှင့်
မုန့်ဆီကြော် တည့်မတည့် မေးသည် ဟုဆိုလိုသည် ၊ လိုသည်ထက်ပို၍ စောစွာတင်ကြို၍ ပြင်ဆင်
ထားခြင်း ကြောင့်ကြခြင်းကို သရော်ခြင်းဖြစ်သည် ။
(၁၅)..။အစာ လောဘကြီးသောကြက် ထောင်ချောက်မိ ၏ ……….(ချင်းစကားပုံ)
အစာ လောဘကြီးသောကြက် ထောင်ချောက်မိသည် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
ထောင်ချောက်မိရခြင်းဟု ဆိုလိုထားသည် ၊လူတွေမှာလည်း အစားလောဘကြီးသူတို့ သည်
စားဖိုးနှစ်ပြီးသေဆုံးနိုင်ကြောင်းဟု ထိုစကားပုံကို ဆိုလိုထားခြင်းဖြစ်သည် ။
(၁၆)..။ကောက်ညှင်းက မစေး ၊ ဆန်ကြမ်းက စေးသည်….(ဗမာစကားပုံ)
ကောက်ညှင်းက မစေး ၊ ဆန်ကြမ်းက စေးသည် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
ကောက်ညှင်းသည် စေးသောဆန်မျိုးဖြစ်သည် ဆန်ကြမ်းသည် စေးကပ်ခြင်းမရှိပေ ၊
ကောက်ညှင်းက စေးရမည်ကို ဆန်ကြမ်းက စေးနေ သည်ဟုဆိုလိုသည် ၊ ဖြစ်သင့်သော
အရာက မဖြစ်ဘဲ မဖြစ်သင့်သောအရာက ဖြစ်နေသည့် အခါ သဘာဝပြောင်းလဲသည့် သဘောဖြင့်
ခိုင်နှိုင်းထားသည် ၊ ဥပမာအားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ ဖြစ်လျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် ယောက်ျားက
အရပ်မြင့် ရမည် ၊ အကယ်၍ ယောက်ျားက အရပ်နိမ့်နေလျှင် သဘာဝ နှင့်ဆန့်ကျင် သည်ဟု
ယူဆတတ်ကြသည် ၊ မိမိစရိုက် သဘာဝအားလျော်စွာ ယေဘုယျသဘောအတိုင်း မဖြစ်သင့်သော
အရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် ထိုစကားပုံကို သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည် ။
(၁၇)..။ယောက်ျားဖောင်စီး၊ မိန်းမမီးနေ၊ ဘေးနီးချေ…..(ဗမာစကားပုံ)
ယောင်္ကျားဖောင်စီး မိန်းမမီးနေ ဘေးနီးချေသည်ဟု ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ
သစ်ဖောင်စီးသောသူသည် သစ်လုံးကွဲပြတ်၍ ရေစီးကြမ်းရာ၌ ဦးစိုက်ထိုးကျခြင်း
အန္တရာယ်များ၍ သေဘေးနီးကပ်လှ သကဲ့သို့ မီးနေသော မိန်းမသည်လည်း သွေးတက်ခြင်း
သွေးသွန်ခြင်း သွေးအားနည်းခြင်း စသည့် အန္တရာယ်များဖြင့် သေဘေးနီးကပ်လာသည်ဟု ဆိုလိုသည် ၊
အသက်ဘေးနှင့် နီးကပ်စွာ စွန့်စားလုပ်ကိုင်ရခြင်းမျိုးကို ရည်ရွယ်၍ သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည် ။
၀မ်းနှင့်မလွယ် သားမမည် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ မိမိဝမ်းနှင့်လွယ်၍
မွေးမရခြင်းရှိသော် မွေးစားသားသမီးကို မိမိတို့၏ သားသမီး ရင်းများနှင့်
ထပ်တူထပ်မျှ သားသမီးဟု မည်တွင်ရလောက်အောင် ကျေးဇူးသိခြင်း ခင်တွယ်
တတ်ခြင်း မရှိဟုဆိုလိုသည် ၊မွေးစားသားသမီးတို့အား အစစ်အမှန်အားမကိုးရကြောင်း
ခလုတ်ထိမှ အမိတသည် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ ဘေးအန္တရာယ် မရှိသေးစဉ်အခါက
မိဘကျေးဇူးကို သတိမရဘဲ ဘေးဒုက္ခတစ်စုံ တစ်ခု ကြုံတွေ့သောအခါတွင်မှ အမလေး
အမေရေ စသည်ဖြင့် မိဘကို အားကို ရာအဖြစ် တမ်းတမြည်တမ်းတတ်ကြသည်ဟု
ဆိုလိုသည်။ ကြိုတင်သတိမူ ဆင်ခြင်ခြင်းမရှိဘဲ ဖြစ်လာသောအခါတွင်မှ
နောင်တရခြင်း၊ ပူပန်ခြင်းဖြစ်ရတတ်ပုံကို ရှုတ်ချ၍
အရိုးကို အရွက်မဖုံးသင့် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
မူလအရင်းခံဖြစ်သော အရိုးအစဉ်ကို အရွက်နှင့်တူသော နောက်မှပေါ်ထွက် သည့်
ဆန်းပြားပြုပြင်မှု့ တို့က ဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်ခြင်း မပြုစေသင့်ဟု ဆိုလိုသည်။
ရှေးရိုး ရာအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းသင့်ကြောင်း တင်ပြရာ၌ သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည် ။
နှုတ်ခမ်းပဲ့ချင်း မီးမှုတ်သည် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ မီးတောက်အောင် မှုတ်ရာတွင်
မီးမှုတ်သူကလည်း နှုတ်ခမ်းပဲ့၍ လေမပြည့် မီးမှုတ်သော ပြောင်းကလည်း နှုတ်ခမ်းပဲ့၍
လေမလုံဘဲ နှုတ်ခမ်းပဲ့သူက နှုတ်ခမ်း ပဲ့သောပြောင်းနှင့် မှုတ်နေရသည်ဟု ဆိုလိုသည် ၊
အရည်အချင်း ချို့တဲ့သူအချင်းချင်း ဖက်ပြိုင်ချင်း ချို့တဲ့သူ အချင်းချင်းပေါင်းဖက်
အိမ်ထောင်ပြုသူချင်း စသည်တို့ကို သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည် ။
သူခိုးပြေးမှ ထိုးကွင်းထ ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ အပြေးအခုန် ပေါ့ပါးလျင်မြန်စေသော
ဆေးကို ထိုးထားသူသည် သူခိုးဖမ်းမည်ဟု ဆေးတန်ခိုးထကြွအောင် ပေါင်မှထိုးကွင်းဆေးရုပ်ကို
ပုတ်နိုးသော်လည်း သူခိုးထွက်ပြေး လေပြီးမှ ဆေးအစွမ်းပြသည်ဟုဆိုလိုသည် ၊ အချိန်နောက်ကျပြီးမှ
စွမ်းဆောင်နိုင်သည့် အခြေအနေရရှိသည့် အခါမျိုးကို သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ခွေးရူးကောင်းစား တစ်မွန်းတည့် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ ခွေးရူးသည်
စိတ်ဖောက်ပြန်သဖြင့် လူများကို လိုက်လံကိုက်ရာ အားလုံး ထွက်ပြေး
တိမ်းရှောင် ကြရသည်တွင် တစ်ကောင်တည်း မင်းမူနိုင်သကဲ့သို့ရှိသော်လည်း
တစ်မွန်းတည့်အချိန်ကြာမျှသာ လူအများ ဒုတ် အုတ်ခဲ တို့ဖြင့် ၀ိုင်းရံ ရိုက်ပစ်ပေါက်ပြီ
နှိမ်နင်းကြသဖြင့် သေဆုံးရသည်ဟုဆိုလိုသည် ၊ အစွမ်းအစမရှိဘဲ မောက်မာသူသည် ခေတ္တခဏ
အခိုက်အတန့်မျှသာ မော်မာမောက်နိုင်ပြီ နောက်များမကြာမီ ဇာတိရုပ်ပေါ်၍ ပျက်စီးရမြဲဖြစ်သည်ဟု
အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ် ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ် မှာ
လင်နှင့်မယားသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စရိုက်ဝါသနာခြင်းတူညီမှသာ အမြဲတစေ
ဆက်ဆံမှုအဆင်ပြေနိုင်သည်ဖြစ်ရာ သဘောအသွင်စရိုက်မတူညီပါက အိမ်ရှင်မကောင်း
မဖြစ်နိုင်ဟုဆိုလိုသည် ၊ လင်နှင့်မယားစရိုက်တူညီသင့်ကြောင်းကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည် ။